Jillaa Naftiisa Ku Waayay Filim Uu Ku Metelayay Is Deldelaad | Araweelo News Network
Jillaa Naftiisa Ku Waayay Filim Uu Ku Metelayay Is Deldelaad
Jillaa Filim ku Metelayey Is-deldelaad oo u Geeriyooday
Roma(ANN)Nin aflaamta metela (actor) oo Jillayay Filim, isla markaana u dhashay dalka Talyaaniga, ayaa lagu dhawaaqay inuu maskax ahaan dhintay, kadib markii uu ka dhabeeyay daldalaad uu filimka ku metelayey intii uu metelaada Filimka ku guda jiray.
Garsoorka Gobolka Tuscany ee dalka Talyaaniga, ayaa sheegay in jilaagan oo filim ku metelayey in la deldelay ay si khalad ah u dhacday oo ay dhab ku noqotay, taasina keento in maskaxdiisu dhimato oo jidhka sare oo kaliya noolaado.
Xarun la yidhaa The Teatro Lux oo ku taala degaanka Pisa, ayaa war-murtiyeed ay soo saartay lagu sheegay in 10 maalmood ay xidhnaanayso, kadib markii ay si kedis ah ugu dhacday dhacdo naxdin leh.
Ninkan jilaaga ah oo magaciisu yahay Raphael Schumacher oo 27 jir ah oo u dhashay waqooyiga Talyaaniga, ayaa filim ku jilayey isagoo isa soo deldelaya, balse si dhab ah dhacdadu u dhacday, iyadoo xadhigu ku fakaday, sidaasna uu ku deldelmay.
Arrintan naxdinta leh, ayaa dhacday 30 January ee sannadkan 2016 oo filimkan la soo bandhigayey, waxaana jillaaga ku dhacday inuu caafimaad ahaan dhinto oo maskax ahaan uu shaqayn waayo, sida uu sheegay cusbitaalka University of Hospital of Pisa, halkaa soo uu koomo ahaan ku jiro.
Booliska ayaa baadhitaan ku haya Afar qof oo dhacdan ku lug lahaa, kuwaasoo shirkadda uga shaqaynayey tiyaatarka, loogana shakiyey in dilku si dhab ah u dhacay.
Wargeys maalinlaha ah ee Corriera dealla Sera oo Talyaaniga ka soo baxa, ayaa sheegay in jillaagu doortay daqiiqadihii u dambeeyey inuu jilo isagoo xadhiga isku dilaya, halka uu baastoolad ka isticmaali lahaa sida ay ka soo xigteen maamulka shirkadda.